ငှက်ဖျားဆေးဝါးများ | Buzzoff
ငှက်ဖျားရောဂါအကြောင်း အချက် ၁၀ချက်
ငှက်ဖျားရောဂါ ပြဿ နာ
Menu:အထူးဖော်ပြချက်အရင်းအမြစ်များ- BuzzOff ဟောပြောပွဲ- ခြင်နှင့်ခြင်ကိုက်ခြင်း- ငှက်ဖျားရောဂါအကြောင်း အချက် ၁၀ချက်- ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်သောအရာများစိန်ခေါ်မှုများ- ငှက်ဖျားရောဂါနှင့် HIV/AIDS- ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ- ငှက်ဖျားရောဂါ ပြဿ နာ- သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါကာကွယ်မှုများ- ငှက်ဖျားရောဂါအကြောင်းသိကောင်းစရာများ- ငှက်ဖျားဆေးဝါးများကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ပါ။
ထုတ်လုပ်ထားသောငှက်ဖျားဆေးဝါးများသည် ငှက်ဖျားရောဂါပိုး ပလပ်(စ်)မိုးဒီယမ် (Plasmodium) ကိုထိ ရောက်စွာ ကုသ၍ရနိုင်ပါသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ ငှက်ဖျားဆေးများသည် ငှက်ဖျားပိုးရှိဒေသများသို့သွားသောသူများ ရောဂါကိုကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ရန် အတွက်သော်၎င်း၊ တခြားအချိန်များတွင် ငှက်ဖျားရောဂါရှိသူများကို တိုက်ရိုက်ကုသရန်အတွက်သော်၎င်းထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
ကုသရန်အတွက် ပထမအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောငှက်ဖျားဆေးမှာ ကွိနိုင် (Quinine)ဖြစ်ပြီး ၄င်းကို စင်ခိုးနား (Cinchona) အခေါက်မှရရှိပါသည်။ ၄င်းအပင်ကို ပီရှူး (Peru) နိုင်ငံမုန်သုံသစ်တောမှ (၁၇) ရာစုနှစ်တွင် တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ဤဆေးသည် တခြားငှက်ဖျားဆေးများမပေါ်မှီ (၁၉၄၀) ခုနှစ်အထိ ဆေးကုသမှု၌ အသုံးပြုခဲ့ရသော တစ်မျိုးတည်းသောဆေးဖြစ်ပါသည်။ (၁၉၄၀) ခုနှစ်မှစပြီးအခြား ငှက်ဖျားဆေးများကို ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ Quinine ငှက်ဖျားဆေးကို ငှက်ဖျားရောဂါကုသရာတွင် အသုံးပြုသော်လည်း ခေတ်ရေးစီးကြောင်းတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ တခြားပေါင်းစပ်ငှက်ဖျားဆေးများ (synthetic drugs) ထုတ်လုပ်လာနိုင်ပြီး (P.f) ငှက်ဖျားရောဂါပိုး ကုသရာတွင် (၉၀ %) သေစေသော ငှက်ဖျားဆေးသစ်တစ်မျိုးကို ထုတ်လုပ်လာနိုင်ပါသည်။ ၄င်းဆေးသစ်မှာ (Chloroquine) ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ထိ (Chloroquine)ကို အကြယ်တ၀င့်သုံးစွဲလျှက်ရှိပါသည်။ (Chloroquine)သည်ထုတ်လုပ်ရာတွင်ဈေးသက်သာပြီး ၀ယ်ယူရာတွင် လည်းဈေးသက်သာပါသည်။ အဘက်ဘက်မှစိတ်အချရဆုံးဆေးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် (P.f)ပိုးသည် (Chloroquine)ဆေးနှင့်ယဉ်ပါးမှုရှိလာသည်။
ယနေ့ ကလိုကွင်းဆေးသည် ယဉ်ပါးမှုဖြစ်ပေါ်လာပြီး ထိရောက်မှုလျော့ပါးစေသော်လည်း နိုင်ငံအများတွင် ၄င်းဆေးကို ပထမဦးစားပေးအနေနှင့်သုံးစွဲလျှက်ရှိပါသည်။ (Chloroquine)ဆေး ယဉ်ပါးမှုဖြစ်သော ပထမနိုင်ငံများမှာ ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ ကမ်ဘိုးဒီးယားနှင့် အရှေ့တောင်အာရှရှိနိုင်ငံများဖြစ်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် အကြံပြုလိုသည်မှာ ကလိုကွင်း သုံးသည့်အခါ အခြားငှက်ဖျားဆေးတစ်မျိုးမျိုးနှင့် ပေါင်းစပ် အသုံးပြုပါက ပို၍ထိရောက်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ ကလိုကွင်းသည် (P.v) ငှက်ဖျားပိုးအတွက် ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO)အနေနှင့် (P.f)အတွက်သုံးရန် မထောက်ခံတော့ပါ။
(P.f)ငှက်ဖျားရောဂါသည် (Chloroquine) ဆေးတစ်မျိုးတည်းသာမဟုတ်ဘဲ အခြားငှက်ဖျားဆေးဖြစ်သော (Sulfadoxine Pyrimethamine, Atovaquone နှင့် Larium(Mefloquine) ဆေးများနှင့်လည်းယဉ်ပါးမှု ရှိလာသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် တရုတ်ပြည်မှ ငှက်ဖျားဆေးသစ်တစ်မျိုး ၀င်ရောက်လာပါသည်။ (Artesiminins) ငှက်ဖျားဆေးသည် (Artemesia Annua) အပင်မှဖြစ်ပြီး တရုတ်ပြည်မှ ၁၉၇၀ ခုနှစ်မှစတင်၍ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ 34AD မှစ၍ ၄င်းအပင်ကို တရုတ်ဆေးဝါးအဖြစ် ငှက်ဖျားကုသရာတွင် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။
(Synthetic) သည် ဈေးကွက်တွှု အာတိစူနိတ် (Artesunate ) အဖြစ် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ အာရှတွင် အာတိစူနိတ်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရရှိနေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် မသမာသူများသည် ဆေးအတုများကို ဈေးကွက်အတွင်းရောင်းချလျက်ရှိခြင်းကြောင့် လူနာအများစုအသက်ဆုံးရှုံးနေရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကွင်းဆင်းဝန်ထမ်းများသည် ဆေးများကို သေချာစွာစစ်ဆေးကြည့်ရှူ့ပြီးမှ ၀ယ်ယူသုံးစွဲသင့်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ခန့်တွင်(Pf) ငှက်ဖျားပိုးသည် (Artesunate) နှင့် (Artesunate Combinations Therapies ACT) ဆေးများ နှင့် ယဉ်ပါးမှုရှိလာကြောင်း ထိုင်းနှင့် ကမ်ဘိုးဒီးယား နယ်စပ်များတွင် တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ သို့သော် (Chloroquine) လောက်ဆေးယဉ်ပါးမှုပြင်းထန်စွာမရှိကြောင်းသိရှိခဲ့ရပါသည်။ ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ကုမ္ပဏီများသို့ အရေးကြီးသောငှက်ဖျားရောဂါအတွက် ငှက်ဖျားပျောက်ဆေး အသစ်များ စီမံဖော်ထုတ်ပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါသည်။
ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏အကြံပြုချက်အရ ငှက်ဖျားဆေးတစ်မျိုးတည်းကို အသုံးမပြုဘဲ (Artesunate Combinations Therapies ATC) ဆေးများပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဆေးတစ်မျိုးစီ၏ထူးခြားသော အာနိသင်ကြောင့် ဆေးကုသရာတွင်းပိုမိုအစွမ်းထက်ထိရောက်မှုရှိလာပါသည်။ ၄င်းအတွက်ကြောင့် ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် (Artemisinin malaria medicines) တစ်မျိုးတည်းကိုသာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှု မပြုလုပ်ရန် ကုမ္ပဏီများသို့ မေတ္တာရပ်ခံထားပါသည်။ ဆေးတစ်မျိုးတည်းအသုံးပြုပါက ငှက်ဖျားပိုးဆေးယဉ်ပါးမှုကြောင့် ရောဂါရှင်းရှင်းမပျောက်ကင်းနိုင်ပါ။ ၄င်းသည် ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏နောက်ဆုံးပြုစုချက်အရ Artemisinin ဆေးယဉ်ပါးမှုဖြစ်ပါသည်။
Buzz Off သည် ကမ္ဘာကျန်းမားရေးအဖွဲ့၏အဆိုပြုချက်များကို ထောက်ခံပြီး လိုက်နာကျင့်ဆောင်သွားရန်ဖြစ် ပါသည်။
ငှက်ဖျား Vaccine ကို လက်တလောသုသေတနပြုလျှက်ရှိပါသည်။ လွန်ခဲ့သော (၁၂)လမှ Vaccine အမျိုးမျိုးကိုကြော်ညာ၍ မကြာခဏစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်လျှက်ရှိပြီး အလားအလာကောင်းများရှိပါသည်။ ဆက်လက်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်လျှက်ရှိပါသည်။ ၄င်း Vaccine သည် ငှက်ဖျားပိုးအတွက် ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါသည်။
ငှက်ဖျားပိုးအမျိုးမျိုးရှိသကဲ့သို့ ကာကွယ်ဆေးများလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ ထို့အတွက် ငှက်ဖျားဒေသို့သွားမည့်သူများသည် ငှက်ဖျားကာကွယ်ရန်အတွက် မိမိသွားရောက်လိုသည့် ဒေသအကြောင်းကို ကြိုတင်လေ့လာသိရှိထားသင့်ပြီး ဆရာဝန်ကြီးများနှင့်တိုင်ပင်၍ ပို၍သင့်လျှော်ထိရောက်သောငှက်ဖျားကာကွယ်ဆေးများကို သောက်သုံးသင့်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများသည် ငှက်ဖျားဆေးမသောက်ခင် မည်သည့်ဆေးများမှီဝဲထားကြောင်း သိထားသင့်ပြီးသင့်လျှော်သောငှက်ဖျားကာကွယ်ဆေးများကိုသောက်သုံးရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဓိကအချက်မှာ ဆေးများကို အညွှန်းပါအတိုင်းမပျက်မကွက်သောက်သုံးရန်နှင့် ငှက်ဖျားဒေသမှ ပြန်လာအပြီးတွင်လည်း (၂)ပတ်ဆက်တိုက်ဆက်၍သောက်သုံးသင့်ပါသည်။ ခရီးသွားနေစဉ်အတွင်း ငှက်ဖျားပိုးရှိသောခြင်တစ်ကောင် အကိုက်ခံထားရပါက သင်၏အသည်းထဲတွင်ငှက်ဖျားပိုများများလာပြီး ငှက်ဖျားတက်ပါတော့သည်။
ငှက်ဖျားရောဂါကာကွယ်ရန်ထိရောက်သောဆေးဝါးများထုတ်လုပ်နိုင်ရန်နှင့်မလုံလောက်သေးပါ။ ငှက်ဖျားဒေသများရှိ ဆေးခန်းငယ်လေးများတွင်လည်း ထိရောက်သောငှက်ဖျားဆေးဝါးများ လုံလုံလောက်လောက်ရှိထားရန်မှာ အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ Buzz Off သည် ပိုမိုကောင်းမွန်ထိရောက်သောငှက်ဖျားဆေးဝါးများကို ဆေးခန်းငယ်လေးများမှ လက်ခံရရှိနိုင်ရန်အတွက် ပံ့ပိုးကူညီမစပေးနေပါသည်။ သင်တို့၏အလှူသည် အသက်ပေါင်းများစွာအတွက် ထိရောက်သော ကူညီမစမှုဖြစ်လိမ့်မည်။
Buzzoff is an initiative of Australian Mercy, for more information in English go here
RT @stevegumaer: Extra judicial killings by the #Myanmarjunta is not just an ethnic state story anymore- it's everywhere in #Myanmar. And t… 1 year ago
Cough and sneeze into your elbow #StopCovid19 https://t.co/VEshSfVmAm2years ago
RT @UN: Nearly 70,000 children have been displaced by escalating violence in northeast Syria. @UNICEF renews its call for all parties to…3years ago
ှု"BuzzOff ငှက်ဖျားသင်တန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန့်မာ့အသံမှမေးမြန်းချက်များ"